Global Voices teny Malagasy · 27 Febroary 2019
27 Febroary 2019
Tantara tamin'ny 27 Febroary 2019
Dokambarotra Japoney Nikendrena Ny Vehivavy, Voakiana Noho Ny Tsy Fitiavany Vehivavy. Indray….
Azia Atsinanana27 Febroary 2019
Ity no farany nivoaka taorian'ireo dokambarotra Japoney maro be izay niteraka resabe tanaty aterineto momba ny hafatra voalaza fa mankahala ny vehivavy.
Korontana Tao Addis : Mitatitra Ireo Blaogera sy Mpanao Gazety Any an-Toerana
Afrika Mainty27 Febroary 2019
Tanatin'ny telo andro izao no niaina tanteraka tanaty herisetra i Addis Abeba, satria namaly ny tora-bato natao taminy tamin'ny alalan'ny fitifirana basy ireo polisy sy ireo tafika mitam-piadiana mahery vaika. Maherin'ny telopolo no voalaza fa namoy ny ainy. Nabaribarin'ireo bilaogera sy mpanao gazety tao an-toerana ho an'izao tontolo izao tamin'ny...
Lasa loharanon-dahatsoratra ho an'ny fifaninanana fandikan-teny manerantany any amin'ny Repoblika Tseky ny Global Voices
Eoropa Afovoany & Atsinanana27 Febroary 2019
Strč prst skrz krk. Tsia, tsy kitendritendry tsinahy nataon'ny saka nandeha teo ambonin'ny kitendry io akory fa tena fehezanteny Tseky misy izay midika hoe ‘alefaso any an-tenda ny rantsan-tanana’. Angamba mety tsy ho ilay fehezanteny tena mahazatra izany kanefa matetika ity fiteny ity dia lazaina ho ohatra mifanakaiky amin'ny ‘tsy...
“Tsy maintsy hajaina ny endrika jeopolitika, saingy tsy tokony ho rendrika ao anatiny isika”
Amerika Avaratra27 Febroary 2019
"Antenainay mba tsy ho lasa toerana hifanandrinana ny habakabaka"
Iran: Mibilaogy mahavoaheloka ho faty?
Iràna27 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nifidy ny volavolan-dalàna mikatsaka ny “hanamafisana ny sazy amin'ny fanakorontanana ny saim-bahoaka ao amin'ny fiarahamonina” ny parlemantera Iraniana. Miampy ny lisitry ny heloka mahazo ny fanamelohana ho faty ny andininy amin'ity volavolan-dalàna ity toy ny “fananganana tranonkala sy tranonkalam-bilaogy...
Pakistan: Voasivana ny lahatsary iray mampiseho ny herisetran'ny miaramila
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Febroary 2019
Niparitaka tamin'ny aterineto ny horonantsary iray mampiseho ny herisetra miaramilan'ny tafika nandritra ny fanafihany tao Swat.
Shina: Niitatra tany Guangzhou sy Shenzhen ny fisoratana anarana tena izy amin'ny bilaogy bitika
Shina27 Febroary 2019
Nihitatra nanomboka tao Beijing hatrao Guangzhou sy Shenzhe ny fandaminana ny fisoratana anarana tena izy ho an'ny sehatra bilaogy madinika.